Media sosialy ho fitaovana fitantanana krizy | Martech Zone
Media sosialy ho fitaovana fitantanana krizy
Alarobia, Jona 12, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nialoha ny fotoanantsika izahay! Tokony ho 5 taona lasa izay dia niara-niasa tamin'i Adam Small aho ary nanangana fampandrenesana lahatsoratra mangatsiaka miaraka amin'ny WordPress izahay. Ny antenainay dia ny hividianan'ny olona ny krizy sy hampiasa azy… mandefa fanairana ary mitondra olona hiverina amin'ny foibe baiko natsangana tao amin'ny WordPress hamoahana ny mombamomba azy ireo. 5 taona aty aoriana ary toa ny olona mitantana ny krizy izao no mandray ny media sosialy farany hamoahana ny teny!
Mba hahatratra ny mpihaino marobe araka izay haingana araka izay azo atao, ireo masoivohon'ny governemanta, ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ireo orinasa hafa dia mitodika any amin'ny media sosialy hitantanana ny krizy.
Tena mankasitraka an'io mandanjalanja sy mandinika io sary avy amin'ny tranokala Degree Management Degree izay manome torolàlana sy fahitana momba ny fampiasana ny media sosialy ho fitaovana fitantanana krizy.
Tags: fikambananakrizyfitantanana krizyMaso ny governemantaFikambanana tsy mitady tombontsoa
Fahadisoana 10 ao amin'ny Twitter